Fitaovana Fitness Fitness, Fitness Fitness, Fitaovana fanatanjahantena fiaramanidina - Baisheng
"People-oriented" no fototry ny kolontsaina orinasa misy antsika. "Tombontsoa iraisana, fanavaozana tena tsara, fanajana ny maha-olombelona sy ny fiasa mitohy" no foto-kevitry ny raharaham-barotra. Izahay dia hampiroborobo ny fanavaozana sy ny zava-misy, hanao ny vokatra tsara indrindra miaraka amin'ny fitaovana kilasy voalohany.
Famonoan-tsokosoko amin'ny valan-tsolika amin'ny valan'orinasa
0 Masinina fanaovan-gazety milina triceps
Ny bisikileta anatiny anatiny BS-6521
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD izay manampahaizana manokana momba ny fikarohana sy ny famokarana fitaovana fanaovana gym. Ny BS SPORTS dia manana famatsiam-bola dolara USD 3 tapitrisa, mandrakotra ny velaran'ny tany mihoatra ny 10000 metatra tora-droa.
Ny tontolon'ny orinasa BS SPORTS dia mirakitra ny serivisy R&D, Production, Sales ary aorian'ny varotra ny fitaovam-pivarotana ara-barotra arak'asa, trano fanaovana gym an-trano ary vokatra mifandraika .Ny vokatra 70% dia amidy any Amerika Avaratra, Eoropa Atsinanana, Atsinanana, Taiwan, ongKong sns.
Fitaovana fanatanjahan-tena azonao vidina ho an'ny workouts trano rehefa mitohy ny quarantine coronavirus
Ny fananganana trano fanaovana gym tonga lafatra dia midika fa tsy mila mandoa vola amin'ny fanaovana gym ianao na mpanofana manokana. Ny fitaovana ilainao ihany no mety. Ary ny fitaovana ampiasainao dia miovaova arakaraka ny haavon'ny fahaizanao sy ny tanjonao. Miezaka ny manary lanja? Aleonao kokoa handoro ny kaloria miaraka amin'ny c ...
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD dia hanatrika ny China Sport Show any Shanghai amin'ny Mey 2020 ary hanatrika ny fampirantiana vahiny toa an'i Vietnam, India sns. Miandrandra ny hihaona aminao any!
Shinoa mpamatsy vola vita amin'ny plastika avo lenta
Address: No.2 Zhengxian Road, Paoche Town, Pizhou City, Jiangsu Province, China
Finday: 86- (0) 516-66220516